कतार जहाँ बनाउन थालियो सडकको रङ्ग निलो, कारण थाहा पाउनुहोस् (७ तस्विर सहित) « Etajakhabar
कतार जहाँ बनाउन थालियो सडकको रङ्ग निलो, कारण थाहा पाउनुहोस् (७ तस्विर सहित)
नेपाल होस् वा विदेश, अधिकांश सडकहरू तपाईंले कालो देख्नुभएको होला। तर एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ सडक निलो हुन्छ । हो, कतार देशका सडकको रङ नीलो छ, त्यहाँ जाने हरेक व्यक्तिलाई कतारले आफ्नो सडक सुन्दर बनाउन निलो रंग प्रयोग गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तपाईलाई भनौं, यसअघि यहाँ पनि सडकको रंग कालो वा खैरो दिइएको थियो, तर अहिले नीलो रङ दिनुको कारण अर्कै छ । यो थाहा पाएपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ कि नेपालमा पनि यही रंगको सडक हुनुपर्छ।
कतारका सडक किन नीलो रंगिएका छन् ?
ग्लोबल वार्मिङले सम्पूर्ण विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ र यो मुद्दा सधैं चर्चाको विषय बनिरहन्छ। लगातार बढ्दो तापक्रम विश्वका लागि समस्या बनेको छ, जहाँ धेरै देशहरूले ग्लोबल वार्मिंगसँग जुध्न आवश्यक कदम चालिरहेका छन्। यसैबीच कतारले पनि ग्लोबल वार्मिङसँग ल’ड्न आफ्नो सडकलाई नीलो रंगमा परिवर्तन गरेको छ, ताकि कतारको बढ्दो तापक्रमबाट राहत पाउन सकियोस्। निलो सडकले तापक्रम सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
रङ फेरेर के फाइदा हुन्छ ?
निलो सडक बनाउने काम सबैभन्दा पहिले कतारको दोहा शहरबाट सुरु भएको हो । दोहाबाट निलो सडक निर्माणको प्रारम्भिक काम कतारले गरेको छ । कतारले निलो सडकहरूले वास्तवमै तापक्रम कम गर्छ कि भनेर धेरै परीक्षणहरू पनि गरेको छ।
यसका लागि कतारमा १८ महिनाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिएको थियो । विज्ञहरुका अनुसार कतारले आफ्नो सडकको तापक्रम घटाउन यस्तो योजना बनाएको हो । यस बाहेक तापक्रमको भिन्नता हेर्न धेरै सेन्सरहरू पनि जडान गरिएको थियो जसको मद्दतले परिवर्तनहरू देख्न सकिन्छ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार कालो वा खैरो सडकको तापक्रम २० देखि २५ डिग्रीभन्दा बढी हुन्छ। कालो रङले सबैभन्दा बढी गर्मी तान्ने विश्वास गरिन्छ। यही कारण सडकको छेउमा रुख नहुँदा तापक्रम झन् बढ्छ ।
त्यसैले कतारले आफ्ना सडकलाई निलोमा परिवर्तन गरेर यहाँको तापक्रम १५ देखि २० डिग्रीसम्म घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो पहिलो पटक भने होइन, कतार बाहेक लस भेगास, मक्का र टोकियो सहरको सडकलाई पनि निलो रंगमा रंगिएको छ ।